I-Big 1 Bdrm Apt in Hip Marnix Place - Antwerp-Zuid - I-Airbnb
I-Big 1 Bdrm Apt in Hip Marnix Place - Antwerp-Zuid
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJan
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uJan iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Eqaqambileyo, iflethi entsha ye-65 sq yeemitha elingana ngokukhululekileyo nabantu aba-2. IFlethi inemvakalelo epholileyo yokwenyani, inefenitshala entle kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo ngekhitshi elitsha kunye negumbi lokuhlambela. Ifakwe kwindawo yase-Antwerp eMazantsi edumileyo yaseMarnix-umgama wokuhamba ukuya kwiindawo zokutyela kunye neevenkile!
Eli gumbi linomtsalane, lanamhlanje linegumbi elinye likumbindi wokwenyani we-Antwerpse Zuid. Kanye ekoneni uya kufumana iiMarnixplaats kunye neLeopold de Waelplaats, ezimbini zezona ndawo zinomtsalane esixekweni, zizaliswe ziibhari zehip, iindawo zokutyela ezinkulu ezinendawo yokutyela yangaphandle kunye neekhefi ezintle ezipholileyo.
Yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlola iAntwerp ngeenyawo. Ukuhamba nje imizuzu elishumi ukuya kwiNationalestraat kude neGroenplaats kunye neziko lembali laseAntwerp. Ukuhamba ngemizuzu emihlanu ukuya kwi "Kaaien", apho unokuwuthanda khona umlambo iSchelt. Kwaye enye imizuzu emihlanu yokuhamba ukuya kwi "Huidevettersstraat", enye yeendawo eziphambili zokuthenga!
I love to travel with my dog Brooklyn and meet different people from around the world.